Safiirka Soomaaliya u fadhiya Dalka Koonfur Afrika oo laga gudoomay Waraaqihiisa Safiirnimo. Daawo Sawirro – idalenews.com
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Dalka Koonfur Afrika oo laga gudoomay Waraaqihiisa Safiirnimo. Daawo Sawirro
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Dalka Koonfur Afrika Ambassador Sayid Xasan Shariif C/llaahi ayaa warqadihiisa Safiirnimo laga gudoomay isaga iyo Safiiro ka kala socday Wadamo ay ka mid yihiin Burundi,Sweden, Canada, Cuba iyo kuwa kale, Xaflad lagu qabtay Qasriga Madaxtoooyada Koonfur Afrika ayaa waxaa uu ka gudoomay Madaxweyne Jecob Zuma Safiiro uu ka mid yahay Sayid Xasan Shariif Cabdullaahi Safiirka Soomaaliya u fadhiya Koonfur Afrika.
Intiii Xafladaasi lagu gudo jiray Qudbad uu u jeediyay Madaxweynaha Safiiradii kasoo qeyb galay ayaa waxaa uu ku soo dhaweeyay Safiirada Dalkiisa isagoo sheegay in uu aad ugu faraxsanahay wadashaqeynta Dowladiisa iyo dowladaha kale.
Sidoo kale Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jecob Zuma oo Qudbadiisa u badnayd Arimaha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in aad ugu faraxsanahay in ay Soomaaliya ku yeelato Danjirihii ugu horeeyey dalkiisa.
Ambassador Sayid Xasan Shariif C/llaahi ayaa isna dhankiisa u sheegay Madaxweyne Jecob Zuma in uu fariin salaan gaar ahaan uu Madaxweynaha Dowladda Federalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ugu wado isagoo ugu mahadceliyay sida ay Dowlada Koonfur Afrika u qaabishay.
Waa markii ugu horeeysay ee ay Soomaaliya ku yeelato Safaarad dalka Koonfur Afrika iyadoo tani ay noqonayso midd taariikhi ah,waxaan Koonfur Afrika ku nool Soomaali farabadan ee aan horay u heysan Dowlad xuquuqdooda kala hadasha Dowlada Koonfur Afrika.